मस्कोमा कोभिडवि’रुद्ध खोप सेवा अभियान सुरु कस्तो छ त यस्को प्रभाव ? «
मस्कोमा कोभिडवि’रुद्ध खोप सेवा अभियान सुरु कस्तो छ त यस्को प्रभाव ?
प्रकाशित मिति : २१ मंसिर २०७७, आईतवार १२:३०
रूसले राजधानी मस्कोका क्लिनिकहरूमार्फत् कोरोनाभाइरसको उच्च जो’खिममा रहेका मानिसहरूलाई कोभिड–१९ वि’रुद्ध खोप सेवा उपलब्ध गराउन थालेको छ ।कोभिड–१९ वि’रुद्धको अभियान भनिएको सेवाका लागि गत अगस्ट महिनामा रूसले मान्यता दिएको स्वदेशमै निर्मित स्पुत्निक–५ खोपको प्रयोग भइरहेको छ ।
खोप विकासमा संलग्न अधिकारीहरूले उक्त खोप ९५ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको र यसको प्रयोगबाट कुनै उल्लेख्य न’कारात्मक प्रभाव नदेखिएको बताएका छन् । खोपको रूस लगायतका स्थानमा सामूहिक परीक्षण तथा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
पछिल्लो ३० दिनमा कुनै सुई लगाएका वा श्वासप्रश्वासमा समस्या भएकाहरूलाई खोप नदिइने उनले बताए । उनले दीर्घरो’गी, गर्भवती र स्तनपान गराइरहेका महिलालाई पनि खोपको प्रारम्भिक अभियानमा सम्लग्न नगराइने बताइएको छ ।